विशेष « Dainiki
जनता निराश भयो भने देश बर्वाद हुन्छ, जनतामा आत्मविश्वास जगाऔँः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेको विचार साथीहरु, तपाईंहरुले आज यहाँ थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउनु भएको छ । हरेक विषयहरुमा जानुभन्दा अगाडि मेरो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनु
नागरिकको सुरक्षाप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो: कोरोनाबाट नेपाली जनता ‘डराउनुपर्दैन’
२४ माघ, काठमाडौं । सातायता मूल्यवृद्धिसँगै आएको शब्द हो- ‘कोरोना भाइरस’ । झन्डै माघको सुरुवातसँगै चीनमा देखापरेको कोरोना भाइरसले अहिले नेपालमा पनि आतंक फैलाइरहेको अवस्था छ । यसको मतलब कोरोना
राजिनामापछि ३४ सिडिओको सरूवा गर्ने राई नै नैतिकवान ! जसले गृहमन्त्रीलाई रबरस्टाम्प बनाए
२३ माघ, काठमाडाैँ। गृह मन्त्रालयकाे सचिवबाट राजिनामा दिएका प्रेमकुमार राईकाे अहिले चर्चा छ । अनिवार्य अवकाशकाे केहिदिन अघि राजिनामा गरेका राईकाे उच्च नैतिकताकाे विषयलाई लिएर धेरैले चर्चा गरेका छन ।
हत्यारा आलमको पक्षमा सडकमा जुलुश निकाल्ने कांग्रेसले गच्छदारका लागि के गर्ला ?
२३ माघ, काठमाडौँ । सधैं सत्ताको चास्नीमा चुर्लुम्म डुब्ने नेता हुन् विजयकुमार गच्छदार । सत्ताको चास्नीमा सधैं डुबुल्की लगाउने नेता गच्छदार अहिले भने भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएका छन् । त्यो पनि कहिल्यै
फर्जी मतले बाकस भरिएको पाइएपछि चिकित्सक संघको मतगणना सुरू नहुँदै स्थगित
२३ माघ, काठमाडाैँ । नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा धेरैनै फर्जी मत खसेको पाइएपछि उम्मेदवारहरूको विवादले मतगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । निर्वाचन समितिले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै
बालुवाटार जग्गा प्रकरणः ओली सरकारलाई भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा सबैभन्दा ठूलो सफलता
२२ माघ, काठमाडाैँ ।, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री
२५ वर्षसम्म कांग्रेसले नबुझेको गाँजाको महत्व कसरी बुझ्यो नेकपाले ?
२२ माघ, काठमाडाैँ । अहिले गाँजालाई बैधानिकता दिनुपर्छ भनेर बहस भैरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद बिरोध खतिवडाको नेतृत्वमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो
‘नेपाल पोर्ट’ तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्दाको सुखद् परिणाम
२२ माघ, काठमाडाैँ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन होला\_नहोला, परियोजना भित्रिएपछि नेपालमा उताका सैनिकको बुट बजारिएला\_नबजारिएला, यी सबै अहिलेलाई सम्भावना र कल्पना अनि चर्चाको विषय हुन् । तर,
ढुक्क हुनुस्, सरकार नेकपाकै निर्देशनमा चल्छः प्रधानमन्त्री ओली
हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । मूलतः राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र समसामयिक प्रस्तावहरू यस बैठकमा प्रस्तुत, छलफल र पारित गरिएका छन् ।
टिप्पणी: लसुन र कुखुराको मासु नखाए हुन्न र ?
२२ माघ, काठमाडौं । नेपाली समाजमा बेला-बेला केही न केही को आतंक छाइरहेकै हुन्छ । जुन सोचिएकै हुँदैन, फ्याट्टै आइलाग्छ । झन्डै ३ महिनाअघि प्याजको आतंकले सबैलाई त्राहिमाम बनायो ।
सरकारसँग डराएका सम्पादक भेलापारेर ओलीले भने ‘हाम्रो बोल्ने कुराको पनि संरक्षण गरिदिनुस्’
२१ माघ, काठमाडौँ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्यो भन्दै डराएका सम्पादकहरू भेला पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नआत्तिन अनुरोध गरेका छन । देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष
भैँसेपाटी गुटबन्दी समाप्त भएको सन्देश दिने बालुवाटारको बाँसुरी-सारंगी गठबन्धन
२१ माघ, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्चा रहेको भैँसेपाटी गुटबन्दी सकिएको संकेत दिने एउटा तस्बीर मगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक